हातमा यी चिन्ह हुनुलाई मानिन्छ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने संकेत ! - News 88 Post
हस्तरेखाशास्त्र अनुसार मानिसको हातमा धेरै प्रकारका चिन्ह हुन्छन्। जसरी हातको रेखाबाट भविष्य थाहा हुन्छ, त्यसैगरी हातमा रहेको निशानले पनि हाम्रो जीवनसँग जोडिएको धेरै रहस्य खुलाउँछ ।
कतिपय अंकलाई धेरै शुभ मानिन्छ, जसले व्यक्तिलाई अपार सफलता ल्याउँछ भने कतिपय अंकले व्यक्तिको जीवनमा समस्याबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्छ । यहाँ तपाईलाई हातमा रहेको शुभ चिन्हको बारेमा बताउँदैछाैँ।
त्रिशूलको चिन्ह: जसको हातमा यो चिन्ह हुन्छ, उनीहरूलाई धेरै भाग्यशाली मानिन्छ। यदि यो चिन्ह पहाडमा वा रेखामा छ भने, यसले व्यक्तिलाई धेरै शुभ फल दिन्छ। यदि यो चिन्ह मंगल पर्वतमा छ भने शिव योग बन्छ। यो योग बनेपछि मानिसको जीवनमा धनको कमी हुँदैन । यस्तो व्यक्ति परोपकारी र सम्पन्न पनि हुन्छ ।
स्वस्तिक चिन्ह: जसको हातमा यो चिन्ह हुन्छ, उनीहरु धेरै भाग्यशाली मानिन्छन् । उनीहरुको जीवनमा कहिले पनि कुनै कुराको कमी हुँदैन । देवी-देवताको विशेष कृपा उनीहरुमा रहन्छ।
कमल चिन्ह: जसको हातमा यो चिन्ह हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको भाग्य निकै बलियो हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू नेतृत्व गर्न माहिर हुन्छन्। यसका साथै भगवान विष्णुको कृपा सधैं रहन्छ ।
तराजूको चिन्ह: जसको हत्केलामा यो चिन्ह हुन्छ, यसलाई माता लक्ष्मीको विशेष कृपा मानिन्छ। यी व्यक्तिहरू बुद्धिमान, कुशल र ज्ञानी हुन्छन्। जताततै सम्मान पाउँछन् । यी व्यक्तिहरूले जीवनको लगभग सबै क्षेत्रहरूमा सफलता पाउँछन्।
रथको चिन्ह : हत्केलामा यो चिन्ह हुने मानिसको जीवन सबै सुख-सुविधाहरूमा बित्छ। यो चिन्ह विरलै धेरै कम मानिसको हातमा देखिन्छ। त्यस्तै, माछाको चिन्ह : जसको हत्केलामा यो चिन्ह हुन्छ, उनको जीवन चमत्कारी मानिन्छ । उनीहरुसँग प्रशस्त धनसम्पत्ति छ ।
रुख चिन्ह: जसको हत्केलामा यो चिन्ह हुन्छ, उनको जीवन सुखमय बित्छ। यस्ता मानिसहरूलाई कहिले पनि कुनै कुराको कमी हुँदैन।
(अस्वीकरण: यस लेखमा दिइएको जानकारी केवल अनुमान र जानकारीमा आधारित छ। कुनै पनि जानकारी वा विश्वास लागू गर्नु अघि, कृपया सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुहोस्।)
एमसीसीमा साना दलका सांसदको विरोध, कसले के भने?
February 27, 2022 N88
कांग्रेस नेता भण्डारी भन्छन्, “संघियता तुरुन्त खारेज गरौं, नेपाललाई सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउँ”